Sidee in ay u guuraan magaalada cusub ama magaalada | USAHello | USAHello
Sidee in ay u guuraan magaalada cusub ama magaalada
In USA, dadku doortaan in ay u guuraan magaalada cusub sababo badan. Dhammaan dadka cusub leeyihiin xoriyadda inuu u dhaqaaqo markii ay doortaan. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee dadka u guurto meel cusub waa shaqo fiican. It is a big decision for you and your family. Here are some things to consider and advice about how to move.
Su'aalaha in aad ka fikirto ka hor inta uusan u dhaqaaqin magaalada cusub
To help you decide whether moving is a good idea, take time to think about why you want to move and if you will be able to find better opportunities when you move. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah su'aalo ah ee aad ka fekeri kartaa, ka hor intaadan guurin:
Ma guryaha laga heli karo bulshadaada cusub?
Intee in leeg doono guri guri ama kharash magaalada cusub?
Ma u baahan tahay inay iska iibiso alaabta guriga iyo alaabta kale ee guriga aad hadda / guri?
Ma jiraan gaadiidka dadweynaha ama aad u baahan tahay si aad u hesho laysanka darawalnimada?
Ma jiraan sar- bixiya adeegyada soogalootiga ama qaxootiga ee bulshada cusub? You can use FindHello si aad u hesho ururada ee magaaladaada cusub.
Waa maxay cimilada sida bulshadaada cusub? Ma leedahay dhar for this jawi cusub?
Waa maxay shaqooyinka laga heli karaa magaalada cusub?
Haddii aad aqbalayaan shaqo sababta oo ah waxa bixiya more, ka warrama haddaan Xujo kharashka ku nool magaaladaas cusub?
Sidee baad ka tago shaqada aad hadda?
Ma koorsooyinka waxbarashada iyo ESL dadka waaweyn laga heli karo beeshaada cusub?
Waa maxay tayada oo ka mid ah dugsiyada dadweynaha ee bulshada cusub?
su'aalo qoyska iyo saaxiibada
Ma leedahay qoyska ama saaxiib in bulshada cusub? waxaad awoodi doontaa in aad iyaga la sii joogno?
Ma aqaan qof kasta oo kale ee bulshada cusub ee aad? Sida aad la kulmi doontaa saaxiibo inay ku caawiyaan?
Will you have childcare in the new community? Waa maxay waxa ay ku kici doonto?
wax muhiim ah in la sameeyo marka aad u guurto
Haddii aad go'aansato in ay tagaan meel kale, oo aanad hubin sida ay u guuraan, loo hubiyo in la sameeyo soo socda:
1) Haddii aad tahay qaxooti, Hubi in loo inaad u sheegto shaqaalaha kiiskaaga aad doonaysid in aad u guurto.
2) Haddii aad qabto heshiis kiro ah oo ku saabsan gurigaaga, hubi in aad raacdo xeerasha heshiiska. laga yaabaa in aad u baahan tahay inaad siiso mulkiilaha ugu yaraan 30 aragto maalmood si ay dib ugu heli deposit ammaanka. On warqad, ku qor in aad u guurto doonaa oo saxiix magacaaga iyo taariikhda.
3) File a isbedel foomka cinwaanka la Adeegyada Socdaalka Mareykanka iyo Jinsiyadda by daabacaadda foomkan una soo diraya in ay USCIS. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in complete the form online.
4) Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad bedesho cinwaankaaga xafiiska boostada US. Waxaad u baahan tahay inaad tan samaysaan si aad u hubiso in aad hesho waraaqaha muhiimka ah ama mail. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa foomka online, ama waxa aad tagi kartaa xafiiska boostada ee maxalliga ah iyo foomka ku buuxi. Haddii aad online samayn, lagaa qaadi doonaa $1 si loo caddeeyo aqoonsiga iyada oo la isticmaalayo credit card ama debit ah. Haddii aad u samayn xafiiska boostada, waxaad u baahan doontaa inaad keento ID aad la, sida laysanka darawalnimada, laakiin waxaa jiri doona lacag la'aan.
5) Haddii aad qabto alaabta aan idin keeni kartaa in aad la, isku day in aad u iibiso. Waxaad heli kartaa sale garaash.
6) U sheeg saaxiibadaa kasta oo idinku waxaad ka dhigteen in aad u guurayso. Ay u ogaadaan qof magaalada ku cusub, kuwaas oo kaa caawin kara. Hubi inaad siiso lambarka telefoonka iyo email address iyo weydiin mudan haddii aad u baahan tahay caawimaad marka aad guurto.
7) Haddii ay suurtagal tahay, helaan meel ay ku nool yihiin ee magaalada cusub ka hor intaadan guurin. Aad baadhitaan karaa meelo on craigslist. Laakiin, Ha siin qof lacag craigslist. Sug ilaa aad ka arki kartaa guriga qof.
8) Haddii aad u baahan tahay caawimaad ama aadan hubin waxa la sameeyo, Waad awoodaa email noogu oo waxaan isku dayi doonaa si ay u caawiyaan jawaabaan su'aalahaaga.
9) If you are receiving any benefits from your state (sida lacag caddaan ah, Gargaarka cuntada, ama daryeelka caafimaadka), you will have to re-apply for all of these benefits if you move to a new state. It will be up to the new state to decide what benefits you will receive.
Sida loo helo meel ay ku noolaadaan